बार्सिलोना भ्रमण गर्न कहिले यो राम्रो हुन्छ यात्रा समाचार
मरियम | | बार्सिलोना, Getaways यूरोप
बार्सिलोना सबैभन्दा धेरै भ्रमण गरिएको यूरोपियन शहरहरू मध्ये एक हो, एक बर्ष लगभग नौ लाख यात्रीहरू, यसको भूमध्य आकर्षणको लागि धन्यवाद। आधुनिकतावादी कला जुन क्याटालानको राजधानी, पौराणिक गोथिक क्वार्टरमा देखा पर्दछ, किनमेल गर्ने र रेष्टुरेन्टहरू जुन उनीहरूको उत्कृष्ट ग्यास्ट्रोनॉमीको घमण्ड गर्छन् यसले कुनै पनि समय भ्रमण गर्ने विशेष ठाउँ बनाउँदछ। अब, बार्सिलोना भ्रमण गर्न कहिले राम्रो हुन्छ?
प्रत्येक मौसममा हामी शहरमा बस्दा योजना बनाउनका लागि अपील गर्दछ। यदि तपाईं बार्सिलोनामा भाग्ने योजनामा ​​हुनुहुन्छ तर वर्षको समय तोकेको छैन भने अर्को पोस्टमा हामी तपाईंलाई तपाईंको श clear्का हटाउन मद्दत गर्दछौं।
5 त्यसोभए म्याड्रिडको भ्रमण गर्नु कहिले राम्रो हुन्छ?
के ग्रीष्म theतु तपाईको लागि समुद्री किनारको पर्यायवाची छ? त्यसैले त्यहाँ कुनै प्रश्न छ। तपाईले बार्सिलोना भ्रमण गर्नुपर्नेछ यस बर्षको समयमा। तापक्रम 30० डिग्रीको आसपास हुन्छ, सूर्य पूर्ण टेन पाउनको लागि सूर्य चम्किन्छ, समुद्र यसको उत्कृष्ट तापक्रममा छ र समुद्री किनारका पट्टिहरू जोशमा छन्। एक धेरै चिसो Mojito समुद्री किनारमा हिंड्नु र भव्य दृश्यहरूको आनन्द लिनु भन्दा राम्रो अरू केहि छैन।
थप रूपमा, गर्मी को समयमा बार्सिलोनाको छिमेकको ठूलो हिस्सा उनीहरूको मुख्य चाडहरू मनाउँछन्। सबै भन्दा राम्रो चिनिनेहरू GRàcia छिमेकमा हुन्, कार्यक्रमको साथ जुन परम्परा, रमाईलो र संस्कृति संयोजन गर्दछ। यसले लोकप्रिय खाना, कास्टेलरहरू, कन्सर्टहरू, करेफोकस र अन्य धेरै गतिविधिहरू समावेश गर्दछ। विशेष उल्लेख छिमेकको सडक को सजावट को योग्य छ, प्रत्येक वर्ष फरक र अद्वितीय, जो धेरै ध्यान आकर्षित गर्दछ र धेरै पर्यटकलाई आकर्षित गर्दछ।
अर्कोतर्फ, ग्रीष्म theतु एक बर्ष बार्सिलोनाको लोकप्रिय पार्क र बगैंचा जस्तै पार्क Güell, Parque de la Ciudadela वा Laberint D 'Horta को बगैंचामा भ्रमण गर्न खर्च गर्न उत्तम मौसम हो। टिबिडाबो मनोरञ्जन पार्क, यूरोपको सब भन्दा पुरानो मध्येको एक, जुन शहरको मनोरम दृश्यहरू छन् जुन घेराको कुनै पनि कुनामाबाट मज्जा लिन सकिन्छ।
बार्सिलोनाका रातहरू तारा अन्तर्गत शहरको टेरेसको साथ रेष्टुरेन्टहरू मध्ये एउटामा रमाइलो साँझ बिताउने छन्। जब घाम अस्ताउँछ, तपाईं फन्ट म्यागिका डे मोन्टजुइकले प्रदान गर्ने संगीत, बत्तीहरू, र and र पानीको उत्सव हराउन सक्नुहुन्न। वर्षौंको बित्तिकै नि: शुल्क कार्यक्रम शहरको मुख्य पर्यटक आकर्षण मध्ये एक भएको छ।
शरद duringतुको बार्सिलोनाको हल्का तापक्रमको फाइदा उठाउँदै बार्सिलोना शहरको सबै रहस्य पत्ता लगाउन विषयगत मार्ग अपनाउनु भन्दा उत्तम के हो? तिनीहरू धेरै विविध छन्: भूत, फुटबल, इतिहास, रहस्य, साहित्यिक…।
यी सुविधाहरूको मार्गले तुरुन्तै भोक जगाउँछ। शरद ofतुको साथ, बार्सिलोनाका सडकहरू चेस्टनट स्टल्सले भरिन्छन् जसले मीठो आलु र ताजा बनाएको चेस्टनट शंकुहरू तयार गर्दछ र जसको वातावरणमा वातावरणमा सुगन्ध छ।
खानाको बारेमा कुरा गर्दा, बोक्वेरिया बजार भ्रमण एक अविश्वसनीय अनुभव हो। यो शहरको सब भन्दा र colorful्गीन ठाउँहरू मध्ये एक हो जुन तपाईंको मुखमा एक ठूलो स्वाद छोड्दछ। यो बर्षको यस पटकको विशिष्ट प्रकारको मशरूमको एक महान किसिमको स्वाद चाख्न लायक छ: मोइक्सर्नन, क्यामा-ग्रोक, रोभेलोस, गेर्गोल्स, आदि।
शरद oftenतु प्राय हल्का हुन्छ र बार्सिलोनामा पर्यटकहरूको संख्या कम हुन्छ, त्यसैले शहर र बजारलाई शान्तपूर्वक खोजी गर्न चाहने मानिसहरूलाई यो खुशी हो।
जाडोमा बार्सिलोना भ्रमण गर्नु चाखलाग्दो छ किनकि यो कम मौसम हो र आवासको मूल्यहरू वर्षको सब भन्दा कम हुन्छ।
तापक्रम चिसो भए पनि, दिनमा दिनमा तापक्रम बढ्छ त्यसैले शहरको पैदल हिड्ने र बार्सिलोनाको सबैभन्दा प्रतीकात्मक संग्रहालय र भवनहरूमा प्रवेश गर्ने समय उत्तम छ। त्यहाँ choose० भन्दा बढी संग्रहालयहरू छनौट गर्न धेरै छन्: नेशनल म्यूजियम अफ आर्ट अफ क्याटालोनियादेखि संसारको रोमान्स्क पेन्टिंगको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स has्ग्रह रहेको पिकासो संग्रहालय, बरस संग्रहालय, चकलेट संग्रहालय, CosmoCaixa ... धेरै अन्य बीचमा!
जाडो महिनाहरूमा विभिन्न उत्सवहरू मनाउँदछन्: सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्रिसमस भनेको एल्स ट्रेस टम्ब्स परेडमा विशेष ध्यान दिईन्छ जुन जनवरी जनवरीको मध्यमा सन्त एन्टोनी र सन्त एन्ड्रयूको छेउछाउमा हुने गर्दछ; सान्ता युउलियामा हरेक फेब्रुअरी १२ मा सिआउट भेलामा सानातिना पदक, वा सन्त मेजरको परेड, मार्च on मा ग्रीसियामा राक्षसहरूको परेडहरू।
वसन्त doतुमा गर्नका लागि एक उत्तम भ्रमण मोन्टजुइक माउन्टेनमा चढाई हो। यहाँ सन् १ 1992 XNUMX २ को ओलम्पिक खेलहरूका सुविधाहरू छन्। गर्नलाई उत्तम कुरा भनेको शीर्षमा जानुहोस् र बोटानिकल गार्डन र ओलम्पिक स्टेडियमको आनन्द लिनुहोस्। अविश्वसनीय दृश्यहरू जसले कसैलाई पनि उदार गर्दैन।
यदि तपाईं वसन्त Barतुमा बार्सिलोना भ्रमण गर्ने योजना गर्नुहुन्छ भने तपाईंले २० मेको संग्रहालयको रातको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। शहरका सबै संग्रहालयहरू र सांस्कृतिक केन्द्रहरूले ठूलो संख्यामा गतिविधिहरूको साथ दर्शकहरूको लागि ढोका खोल्छन्।
र जुन २ 23 जुन स्यान जुआनको रात ताराहरूको मुनि र समुद्रमा अलावटको छेउमा भन्दा वसन्तलाई विदाइ दिन के राम्रो उपाय हो। एक रात एक अद्वितीय र अविस्मरणीय आकर्षणको साथ!
त्यसोभए म्याड्रिडको भ्रमण गर्नु कहिले राम्रो हुन्छ?
कुनै पनि मौसम बार्सिलोना भ्रमण गर्न राम्रो छ किनकि प्रत्येकसँग यसको आकर्षण छ र हामी प्रवासको बखत बनाउन चाहेको योजनाहरूमा निर्भर गर्दछ। व्यक्तिगत रूपमा, म वसन्त र शरद recommendतु सिफारिस गर्दछु किनकि बाँकीको तुलनामा तापक्रम बढी रमाइलो हुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » स्पेन शहरहरू » बार्सिलोना » बार्सिलोना भ्रमण गर्नु कहिले राम्रो हुन्छ?